China China EIR laminate flooring sy orinasa mpanamboatra | DEDGE
Ny rihana laminate 8mm EIR dia vita amin'ny DEGE Floors
Trano namboarin'i DEGE, DEGE no Home
Hatsarana voajanahary, tsotra ary mangina izy io
Hatsaram-panahy tsotra, milamina, manetry tena ary mendri-kaja izy io
Ampidiro amin'ny fomba tsotra sy mangina ny fomba fiainana
Mahatsapa ny hatsaran'ny fiainana amin'ny fiainana
Loko Manana loko an-jatony maro izahay ho an'ny safidinao.
hateviny 7mm, 8mm, 10mm, 12mm no misy.
Size 1218 * 198,1218 * 168,1218 * 148,1218 * 128, 810 * 130,810 * 148,800 * 400,1200 * 400,600 * 100
Fitsaboana ambonin'ny tany Maherin'ny 20 ny karazana habakabaka, toy ny Embossed, Crystal, EIR, Handscraped, Matt, Glossy, Piano sns.
Fitsaboana farany Square Edge, bobongolo press U-groove, 3 strips U grovoe, V-Groove misy sary hosodoko, sary hosodoko, savoka, padding, press sns omena.
Fitsaboana manokana Press U-groove, V-groove voaloko, Waxing, Logo hosodoko amin'ny lamosina, Soundproof EVA / IXPE
Manaova fanoherana AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 fenitra EN13329
Fitaovana fototra 770 kg / m³, 800 kg / m³, 850 kg / m³ ary 880 kgs / m³
Rafitra fanindriana Unilin Double, Arc, Single, Drop, Valinge
Formaldehyde Emission E1 <= 1.5mg / L, na E0 <= 0.5mg / L
Inona avy ireo olana mitranga mora amin'ny EIR Laminate Flooring? Ahoana no hamahana azy?
Amin'ny maha-fitaovana fampiasa mahazatra mahazatra indrindra sy mahazatra azy, ny EIR Laminate Flooring dia neken'ny tsena amin'ny vidiny mora vidy sy amin'ny maha-azo ampiharina. Mandritra izany fotoana izany dia nisy ihany ny olana sasany taorian'ny fametrahana ny gorodona laminate.
1. Mihombo ny seza
A. Ny fametahana ny gorodona misy laminate: Rehefa apetrakao ny gorodona, ny rano mitete avy amin'ny mop na ny hamandoana amin'ny kiraro dia hiteraka rano eo amin'ny gorodona ary hiditra avy eo amin'ny tonon-taolana misy habe kely. Amin'ity tranga ity, ny tonon-taolana eo amin'ny gorodona dia mihombo kely;
B. Ny fidiran'ny rano sy ny fivoahana ao ambanin'ny gorodona: ny fisehoan-javatra ambonin'io dia ny fivontosan'ny tonon-taolana amin'ny endrika mitovy fanamiana kokoa, ny toerana akaikin'ny loharanon'ny rano dia mavesatra kokoa sy mafy kokoa, ary ny halavirana dia mihalalaka hatrany. Ny olana toy izany dia: eo akaikin'ny trano fidiovana, lakozia, fantsom-panafanana, fantson-drano condensate amin'ny rivotra, varavarankely sns. Raha efa natsofoka nandritra ny fotoana ela ny rano dia tsy hita miharihary intsony ny zava-niseho teto ambonin'ny tany, azonao atao ny manokatra ny tany hijerena sao misy dia mari-drano;
C.Laminate Wood Rihana fohy ny tonon-taolana: miseho izy io ho toy ny fihenan'ny tendron'ny lafiny fohy amin'ny gorodona lava, izay matetika vokatry ny hamandoana amin'ny tany be loatra. Arakaraka ny maha avo ny hetaheta no lehibe kokoa ny hamandoan'ny tany.
2. Floor dia Amisavoana
Ny fitehirizana ny gorodona dia vokatry ny fanitarana ny gorodona rehefa mando izy ary eo ambanin'ny fiasan'ny maripana dia mitombo ny habe ary mivory mafy ny gorodona ary tsy afaka mamelatra azy. Tsy afaka mivonto fotsiny izy io raha mankany ambony sy andohalambo. Ireto no antony:
A. Aorian'ny famotorana ny gorodona dia mihabe ny haavon'ny gorodona, miteraka ariska;
B. Rehefa mametraka ny gorodona dia vanim-potoana maina, ary apetraka mafy loatra ny hidiny. Noho izany, rehefa mitombo ny hamandoan'ny tontolo iainana dia manitatra ny gorodona amin'ny fitomboan'ny hamandoan'ny tontolo iainana. Satria tery ny fivoriambe, dia tsy misy na aiza na aiza hanitarana, izay mahatonga ny trangan-javatra arching;
C. Tsy misy fiitarana eo amin'ny rindrina sy ny gorodona ary ny fitambarana dia tsy voatokana ampy. Rehefa mando sy mivelatra ny gorodona dia tsy misy nitarina ny gorodona ka mahatonga ny gorodona hikororoka;
D. Misokatra ny efitrano: Rehefa apetraka amin'ny gorodona mihoatra ny roa ny gorodona, dia tsy misy fehikibo napetraka eo amin'ny fonon'ny varavarana. Rehefa avo ny hamandoana sy ny hamandoana dia mivelatra mitsivalana ny gorodon'ny efitrano roa ka nahatonga ny varavaran'ny efitrano hifampikasokasoka sy hametahana ny gorodona;
E. Ny fitambarana fanitarana dia nofenoina fantsika baseboard na lalotra, putty, fanitarana sns, izay mahatonga ny gorodona tsy afaka mamelatra ary mahatonga ny gorodona hiroraka;
F. Mandritra ny fizotry ny fametrahana azy dia mijanona eo ambanin'ny gorodona ny zavatra vahiny ka miteraka ariska;
G. Ny sosona fototra ao ambanin'ny gorodona dia arched. Ohatra, efa misy gorodona hazo mafy amin'ny tany am-boalohany alohan'ny hametrahana ny gorodona. Rehefa avy apetraka ny gorodona, ny tany tany am-boalohany dia mando sy arched, ka mahatonga ny gorodona ho arched;
H. Alohan'ny hametrahana ny gorodona, ny sarimihetsika miorina amin'ny hamandoana dia tsy mipetraka amin'ny toerany na tsy tery ny tombo-kase, ary miditra amin'ny tany ny hamandoana amin'ny alàlan'ny horonantsary miorina amin'ny hamandoana, ary arched ny gorodona.
A. Tany tsy mitovy: asio ny laminated gorodona rehefa tsy mitovy ny tany, ary aorian'ny fampiasana azy dia avoaka ny lakaoly eo anelanelan'ny gorodona ary misy banga;
B. Lfametahana essai: mafana ny gorodona amin'ny ririnina, maina ny rivotra, mihena ny fiaramanidina gorodona, tsy ampy ny lakaoly iraisana, ary tsy ampy ny tanjaka, ka mahatonga ny gorodona vaky;
C. Misy zavatra mavesatra eo amin'ny sisiny: ny mifanila amin'ny gorodona hamboarina dia tsindriana amin'ilay zavatra mavesatra mankany amin'ny ilany ambonimbony, ka tsy afaka mihemotra malalaka sy vaky ny gorodona; ity karazana efitrano ity dia ho tohanan'ny fahavaratra, ary rehefa tonga ny ririnina amin'ny ririnina Mampiseho triatra;
D. Ny vanim-potoana orana koa dia matetika mitranga amin'ity olana ity.
4. Rindrambaiko misy lamina EIR Stsy fahampiana urface
A. Fianjeran'ny zorony: Ny vodin-tany dia mikorontana mandritra ny fizotran'ny fikirakirana, tsy niraika ireo mpiasan'ny fananganana nandritra ny fizotran'ny fananganana na vaky ny angady rehefa nesorina ny lakaoly taorian'ny fanamboarana, izay nahatonga ny zoron'ny gorodona nilatsaka zorony;
B. Mianjera ny sosona amboniny: Rehefa vita ny fanamboarana dia mianjera ireo fitaovana maranitra na zavatra mavesatra ka manimba ny gorodona, izay misy fiatraikany amin'ny fisehon'ny gorodona; na mandritra ny fizotran'ny gorodona, ny sosona amboniny sy ilay substrate dia tsy voafatotra tsara. Rehefa avy nampiasa nandritra ny fotoana iray dia simba ny sosona amboniny sy ilay substrate;
C. Torotoro: Rehefa mamindra fanaka na zavatra mavesatra amin'ny tany dia misy fantsika na fasika sy potipoti-javatra hafa eo anelanelan'ny gorodona sy ireo zavatra. Ny fitarihana amin'ny tany dia miteraka fahasimban'ny gorodona anaovan'ny gorodona na mampiseho rangotra miharihary; drafitra fikojakojana: savoka Patch na ovao ny gorodona.
5. ny feo
Ireto misy antony manaraka ny olan'ny tabataba amin'ny gorodona:
A. Feon'ny fifandirana eo anelanelan'ny hidin'ny gorodona izy io; satria ny hidim-baravarankely dia avo lenta ary miangona mafy, aorian'ny fanamboarana tsy misy lakaoly, ny ampahany somary tampon'ny hidin-trano dia mety hampiseho feo "mikiakioka"; Tsy dia miseho ny raharaha rehefa salama tsara ny tany.
B. Feon'ny ambonin'ny tany sy ny tsipika fitetezana azy io; rehefa apetraka mafy loatra amin'ny gorodona ny tsipika fikorisa, dia mety hiteraka korontana sy tabataba eo anelanelan'ny gorodona sy ny tsipika fandefasana azy io.
C. Ny olan'ny gorodona no fototry ny tabataban'ny tany. Raha afaka hahatratra haavo ambany noho ny telo metatra ao anatin'ny refy roa metatra ny gorodona dia hihena be ny tabataba amin'ny tany.
D. Ny hatevin'ny gorodon'ny gorodona dia mihoatra ny fenitra, izay ateraky ny elastika be loatra.
E. Ireo fitambarana fanitarana tsy ampy voatokana, ka miteraka fanitarana ny gorodona voafetra, ary fiovana somary arched amin'ny halavany na ny sakany amin'ny gorodona.
F. Ny tsy fahampian'ny fifadian-kanina amin'ny keel dia hiteraka ny laminated ny gorodona sy ny zana-kazo mba tsy atambatra soa aman-tsara, izay hiteraka tabataba eo anelanelan'ny hazo sy ny ala.
Surface embossed lehibe
Rindrina misy tànana
Surface kely vita amin'ny embossed
Surface embossed eo afovoany
Kitiho ny rafitra azo alaina
Misy ny loko miverina
Fitsaboana manokana misy
Fitsapana masinina fanaraha-maso
Fitsapana avo lenta
Laminate Flooring Package Details
Size pcs / ctn m2 / CTN ctns / pallet plts / 20'cont ctns / 20'cont kg / ctn m2 / 20'cont kgs / 20'cont
Fametrahana fitoeran-kontain-tsolika vita amin'ny lamina - Pallet
Fametrahana fitoeran-kazo misy laminate - Carton
Teo aloha: Fitaovana laminate 10 mm EIR
Manaraka: Rindrina hazo vita amin'ny hazo lamin'ny rà mandriaka
Gorodona laminate eir 8mm
Gorodona misy lamina 10mm eir
11mm gorodona vita amin'ny veromanitra
12mm gorodona vita amin'ny veromanitra
1. Mampianara anao hametaka gorodona laminate samirery
Dingana 1: Manomàna fitaovana
1. Antsy antsy; 2. Fatra famafana; 3. Pensily; 4. Tsofa tanana; 5. Spacer; 6. Hammer; 7. Tsorakazo mikorapaka
1. Lamin'ny gorodona 2. Nail 3. Underlayment
Dingana 2: fanomanana alohan'ny fametrahana
1. Laminate gorodona mifanaraka amin'ny tontolo iainana
Azafady apetraka ny gorodona laminate izay novidinao tao amin'ny efitrano mba hapetraka farafahakeliny 2 andro mialoha, ary omeo fotoana ampy izy ireo hifanaraka amin'ny fanitarana na ny fihenan'ny hafanan'ny efitrano sy ny hamandoana. Izany dia misoroka ny hiondrika na olana hafa aorian'ny fametrahana azy.
2. Esory ny fikorisana
Esory ny tsipika skirting efa misy avy amin'ny rindrina amin'ny fampiasana bar pry. Atsaharo ny ampahany ary apetaho indray. Ny laminate mitsingevana (ilay karazana ampiasaina amin'ity tetikasa ity) dia tokony apetraka amin'ny faritra sarotra sy malama, toy ny vinyl. Raha simba ny gorodona efa misy dia esory mba hampiharihary ny gorodona.
Dingana 3: Atombohy ny fametrahana
Fitaovana fototra fametrahana
1. Fototra fametrahana
Atsofohy amin'ny gorodona laminate mitsivalana ilay ondana. Esory ny fotony, fantsika ary fako hafa amin'ny tany. Aza afangaro ny tadiny mifanila aminy, mampiasa antsy antsy hampiasana azy ireo raha ilaina izany. Ny felam-bozaka dia afaka mampihena ny feo ary manampy ny tany hahatsapa ho elastika sy mateza kokoa.
2. Manomana ny lamina
Mba hamaritana ny làlan'ny hazo fisaka, diniho izay rindrina lava sy lava indrindra. Aza soratana tery amin'ny rindrina ifantohana. Ny zana-kazo amin'ny laharana farany dia tokony ho 2 santimetatra ny sakany farafahakeliny. Manaova sary eo amin'ny elanelana 1/4 santimetatra amin'ny rindrina tsirairay.
Fanamarihana: Raha latsaky ny 2 santimetatra ny sakan'ny laharana farany, ampio io sakan'ny sakan'ny tabilao manontolo io ary zarao amin'ny 2, ary tapaho ny laharana voalohany sy farany amin'ireo zana-kazo amin'ity sakany ity.
3. Asa fanapahana
Arakaraka ny filamatrao no mety ilainao mandrovitra na manapaka ny laharana voalohany amin'ny zana-kazo. Raha mampiasa tsofa elektrika dia tapaho ny sisiny vita; raha mampiasa tsofa tanana dia tapaho ny sisiny vita. Rehefa manapaka takelaka dia ampiasao clamp hanamboarana ireo tabilao.
4. Toerana fitehirizana
Ny kitapom-batana vita amin'ny lamina dia mitaky toerana malalaka eo anelanelan'ny rindrina sy ny zana-kazo mba hamelana mpiara-manitatra 1/4 mirefy. Raha vantany vao apetraka ny takelaka fototra, dia tsy ho hita izany.
5. Miantsena ny laharana voalohany
Ampidiro ny ilan'ny lela amin'ny zana-kazo manatrika ny rindrina. Mampifandray zana-kazo iray amin'ny alàlan'ny fampifandraisana lela sy lalan-kely. Mety ho azonao atao ny mampifandray tsara ireo takelaka amin'ny tananao, na mety mila mampiasa ireo kofehy mifono sy palama amin'ny kitapom-batsy ianao mba hitarihana azy ireo, na hampiasa ireo bara fitendrena handefasana ireo tonon-taolana. Hetezo ny solaitrabe farany amin'ny laharana hatramin'ny halavany (raha farafahakeliny 12 santimetatra ny halavany dia tazomy ireo ampahany kely ireo).
6. Mametraha tsipika hafa
Rehefa mametaka andalana hafa dia ataovy tsivalana eo am-pitoerana 12 santimetatra farafahakeliny ny seams eo amin'ny rindrina hazo na biriky. Matetika ianao dia afaka manomboka tsipika vaovao miaraka amin'ny sombin-kazo avy amin'ny hazo fisaka notapahana mba hamaranana ny tsipika teo aloha.
7. Ampidiro ny tsipika farany
Ao amin'ny laharana farany dia mila atsofoka amin'ny zoro ny zana-kazo, ary avy eo atsofohy moramora amin'ny toerana misy bara pry. Hamarino tsara fa mamela 1/4 mirefy fanitarana eo anelanelan'ny laharana farany sy ny rindrina.
8. Hetezo ny fefy varavarana
Aza manandrana manapaka ny zana-kazo hifanaraka amin'ny zotram-baravarana. Fa kosa, ampiasao tsofa sisiny handavana ny vatan'ny varavarana eo amin'ny 1/16 santimetatra eo ho eo noho ny haavon'ny gorodona, mba hahafahan'ny efitranon'ny birao misosa eo ambanin'ilay fefy. Apetaho amin'ny gorodona ny gorodona misy cushion ary akaiky ny akorandriaka. Apetraho eo amboniny ny zana-kazo varavarana, ary avy eo manapaka ny akorany amin'ny haavony irina.
9. Mametaka fitaovana hafa
Mametraka indray ny tsipika haingon-trano. Aorian'ny fametrahana ny hazo fisaka dia ampiasao marmara sy fantsika hametahana indray ilay fefy vita amin'ny gorodona. Avy eo, apetaho amin'ny lasitra fanitarana ny lasitra kiraro ary ampiasao ny tady famindrana mba hampifandray ilay laminate amin'ny faritra mifanila aminy, toy ny tile na karipetra. Aza apetaho amin'ny gorodona fa ampidiro amin'ny ravaka sy ny rindrina.
2. Laminate flooring click system
Ahitana rafi-tsindry samihafa, hafa ihany ny tsindry bika, fa ny fomba fametrahana ihany.
Izy io dia anarana, tsindry tokana, tsindrio indroa, tsindry Arc, tsindrio Drop, tsindry Unilin, tsindry Valinge.
3. Rafitra fanidiana fantsom-boaravary farany misy lamina
12mm Drop click laminate flooring tombony tsara indrindra dia Fast Install, Save more 50% installer laminate flooring time.
Falam-boankazo laminate Pine EIR
Fitaovana laminate 10 mm EIR
Voninkazo laminate EIR tena izy
3 esory u-groove avo glossy HDF laminate EIR ...
Rindrina hazo vita amin'ny hazo lamin'ny rà mandriaka
Lamin'ny laminate 8MM EIR